I-sanatorium yesiFunda "i-Lipovka" esifundazweni sase-Sverdlovsk: izinkomba, iphrofayili yezokwelapha kanye nokubuyekezwa
Ezempilo, Ukuvakasha kwezokwelapha
Kusukela ngo-1953 lesi santo "uLipovka" sithola izivakashi nabakhileyo esifundeni saseSverdlovsk ekhaya. Umtholampilo omkhulu we-balneotherapy wokubaluleka kwamazwe ngokukhethekile ukwelashwa nokuvuselelwa ngenxa yezici zemvelo nezesimo sezulu. Lena enye yezindawo zokungcebeleka ezimbalwa zezempilo ensimini yeRussian Federation, lapho amanzi e-radon ephathwa khona.
Ezikhathini zaseSoviet, kwakukhona izixazululo ezifanayo ezingaba ngu-30, kodwa namuhla inani labo liye lahla kakhulu. Kunezinhlobo ezimbalwa zemithombo ye-radon ezweni lethu. Eminwe ungathola izindawo zokubhuka ezinephrofayli efanayo yezokwelapha: Uvildy, Pyatigorsk, Belokurikha neLovka.
Amagunya kamasipala akwazi ukugcina ukubonakala kokuqala kwe-resort balneological, ngenxa yokuthi abantu bangathola ukwelashwa kwephrofayli eliphezulu ngaphandle kokushiya eRussia. Itholakala endaweni yendawo yesifunda sase-Ural "Lipovka" (sanatorium). Izifundo (ukuvakasha) ekudleni kwezokwelapha eziphuthumayo zithengwa ngqo lapho zifika esiteshini sezempilo.
Ukuze uwuthole, udinga amaphepha amaningi: ikhadi lezokwelapha lokuhamba kwe-fluorography, inqubomgomo, idokhumenti ekhomba ukuthi ungubani, nokuthi kukhishwe ukwelashwa esibhedlela (uma ikhona). Ukuhlala kanye nokwelapha ngezingane kuvunyelwe.
I-sanatorium "i-Lipovka" inokuphumula okuphumule nokuphuculula impilo, njengoba ikude nezitshalo eziyingozi, eduze komfula omsulwa, ezungezwe izimila ze-coniferous. Inani lamakamelo limelelwa izindlu zasehlobo (izingcezu ezine), ezivulekile entwasahlobo nasehlobo, nezakhiwo ezimbili zokuhlala unyaka wonke.
Izivakashi zingakwazi ukubhuka noma iyiphi indawo abayithandayo, kuye ngezifiso zabo siqu nesimo sezimali. Kukhona amakamelo aphuthumayo anezindlu zangasese zangasese, isiqandisisi ne-TV. Kukhona amakamelo eklasi lomnotho enezikhungo ezabelwana ngazo.
Uhlelo Lokunikezwa Kwamandla
Abahlengikazi bezokwelapha nabahlengikazi bakhulisa imenyu ephelele, okufaka uhlu oludingekile lwezakhi nemithi. Abantu abadala nabantwana badla izikhathi ezingu-4 ngosuku ngosuku ekamelweni lokudlela elibanzi. Ukudla kokudla kunikezwa ngeziphakamiso zodokotela olaphayo.
Ngesiguli ngasinye, izinhlelo ezithile, izinqubo kanye nesimiso sezinhlelo zakhiwa, ngokusekelwe ezimpawu zomzimba kanye nesigaba sesifo. I-Sanatorium "Lipovka" (esifundeni saseSverdlovsk) sinesizinda esikhulu sokuxilonga nokwelapha. Ochwepheshe abanokuhlangenwe nakho kweziqondiso ezahlukene zokwelapha basebenza lapha: isazi sokubeletha, urologist, i-neuropathologist, i-dermatologist, isazi sezifo, isazi sezinsuku zokugcina, udokotela wamazinyo.
Izinhlelo ezinzima ezifana ne-"Healthy spine", "Hypertension", "Impilo yabesifazane", "Impilo yabesilisa", "Slenderness", "Isikhumba esihlanzekile" sitholakala esikhungweni. Ukuvuselelwa kwezingane ngemuva kokushisa kwenziwa. Uhlelo oludingekayo lwezokwelapha luhlanganisa ama- radon okugeza - ukutholwa kwabo kukhuthaza ukukhiqizwa kwama-enzyme abalulekile nokuqeda ama-radicals. I-Slabordonovye amanzi ase-sodium asebenzisa zonke izinqubo zamakhemikhali zomzimba, abuyele umsebenzi wezitho zangaphakathi, aqinise ukuzivikela futhi asuse ukuvuvukala.
Esibhedlela esibhedlela, izivakashi zingathola inkambo egcwele ye-psychotherapy, ukuqeda ukwesaba, ukucindezeleka nokukhathazeka kwemizwa. Abantu abanezifo zomgogodla banikezwa i- massage ye-manual. Ukuhlanzwa kwegciwane lomathumbu kuqhutshwa, ukuvuselelwa kwamakhemikhali ngokuya ngendlela eyaziwa yiGerasimov, i-hirudotherapy ne-reflexotherapy.
Ubani oboniswa ukwelashwa kwe-spa?
I-Sanatorium "i-Lipovka" imema iziguli ezine-pathology ohlelweni lwe-musculoskeletal, izidakamizwa ze-endocrine nezidakamizwa. Amanzi e-Radon asiza ekunciphiseni ubuhlungu, okufaka isandla esimweni sokujwayelekile esimweni esijwayelekile futhi sinomphumela wokuqeda. Ukwelashwa kwezidakamizwa kunqunywe izifo zezinzwa nezinhliziyo.
Uhlu lwezifo ezivunyiwe luhlanganisa izilonda, isisu somzimba, isifo sofuba, isifo sofuba, isifo se-hepatitis, i-cholecystitis kanye ne-enteritis. Ngosizo lokunisela kanye nokugeza, kungenzeka ukuphulukisa izidakamizwa zokuvuvukala kwezitho zangasese zobulili (i-adnexitis, i-endometritis, i-fibromyoma), futhi nokuqeda izimpawu ezingathandeki ekunqumeni kokuya esikhathini.
Amanzi ase-Slaboradonovye abuyisela umsebenzi wokuzala. Ngemuva kokuba iziguli zelashwa ziza nezinkinga zesikhumba se-dermatological (lichen, seborrhea, dermatitis, eczema, scleroderma). Ukwelashwa kwenziwa uma lesi sifo sigxile.
I-sanatorium "Lipovka" (Rezh) ayiqondiswa kuphela ekuphatheni iphrofayli, kodwa futhi nokuphumula okugcwele nokuhambisana nokunye. Ukuzilibazisa kwabavakashi, amahholo omdanso namahholo avuselelwa kabusha, lapho izenzakalo zokuzijabulisa zihlelwe khona ngendlela efanele. Kuye kwahlelwa iklabhu yokuzivocavoca yokuzivocavoca kanye nokufudumala kwasekuseni.
Ngaphandle kwezinqubo, ungadlala ithebula le-tennis, amabhilididi noma i-chess. Esibhedlela kukhona ugu lolwandle, ogwini kukhona i-pier boat, izindawo zezemidlalo zokuzijabulisa okusebenzayo. Izikebhe eziqashiwe, amabhayisikili wamanzi kanye namagesi okudoba aqashwa.
Ekusetshenzisweni mahhala kwedamu langaphakathi elisendaweni eyodwa yezakhiwo. Kukhona i-thermae, umtapo wolwazi kanye ne-phyto-bar. Kulabo abafisa ukuhlela uhambo lwezemfundo esifundeni saseSverdlovsk. Zonke izivakashi zilindelwe ukuvakasha okuthakazelisayo okuvela kuzo izimemo ezimnandi.
I-Sanatorium "Lipovka" akuyona ihhotela, kodwa isikhungo sezokwelapha lapho abantu basizwa khona ukuba banqobe izifo zomzimba. Izinqubo ze-Radon kufanele zenziwe ngaphansi kokuqondiswa okuqinile kongcweti kanye nemilinganiselo enomkhawulo. I-Balneotherapy ayinqunyelwe amafomu ajwayelekile wesifo. Ukuphikisana nakho konke kuyi-pathologies yengqondo, ukwakheka kwezinto eziphilayo, isifo sokuhlushwa, isifo sofuba kanye nezifo zegazi. Kwabesifazane abakhulelwe nabancenga, amanzi e-radon nawo akhishwe.
Ngeminyaka yokuba khona kwayo, indawo yokuphumula yezempilo "uLipovka" iye yazibonakalisa ehlangothini oluhle. Ukubuyekezwa kweSanatorium ezivela kubavakashi bahlale bethuthele. Lokhu kungabonakala ngokufunda incwadi yezikhalo neziphakamiso. Abantu abaningi banikeze ithuba lokubuya, abanye - babuyele ekujwayelekile.
Abantu abanokubonga bakhuluma ngekhwalithi yensizakalo, abasebenzi bezokwelapha abaqeqeshiwe kanye nomoya onobungane okhona kuyo yonke indawo. Lapha, phakathi kwehlathi le-coniferous, angifuni ukucabangela ngezinkinga zansuku zonke, izindaba zomsebenzi kanye nezezwe emhlabeni. Umkhathi unomoya okhululekile, ophumule futhi ophumuzayo.
I-Medgard (Togliatti): odokotela, izibuyekezo, ikheli
"Krainka" (indawo yezempilo, isifunda saseTula): incazelo, izinsizakalo kanye nokubuyekezwa
AmaSanatoriums esifundeni saseKaluga: ukuphumula nokuphulukiswa
Ukwelashwa komdlavuza wama-rectal emitholampilo yase-Israel
Sanatorium "Berminvody" (Kharkov / Ukraine): izinsizakalo, ubufakazi kanye nokubuyekezwa
I-Evpatoria, "i-Burevestnik" (i-sanatorium): incazelo, amasevisi nokubuyekeza
Imiqondo kufakwe izindleko yokuthengisa
Aquila: isikimu. Legend of the Akhwila umlaza
Boilers Naven - izinga kanye nokwethembeka
I-design ye-nail, esebenzisa isikhumba se-nail
Indlela yokwenza namasongo eyenziwe lesikhumba
Indoda kwezinsana - umuntu, ongafuni zikhule
Kanjani ukuqinisekisa ukuthi izinga lokushisa injini yokusebenza uhlala ngaphakathi kobubanzi evamile?
Kanjani ukuba bathole imvume ukuba ngumnikazi izibhamu?
Izimbangela ukukhwehlela ngaphandle ezibandayo abadala
Ngasiphi lokushisa ingane yakho ukubiza i-ambulensi? Ngasiphi lokushisa ezinsaneni ukubiza i-ambulensi?